Dowladda Shiinaha oo Puntland ugu deeqday riigga ceelasha qoda. – Radio Daljir
Dowladda Shiinaha oo Puntland ugu deeqday riigga ceelasha qoda.
Diseembar 2, 2016 8:54 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii u danbeeyay booqasho rasmi ah ku joogay dalka Shiinaha ayaa masuuliyiinta State-ka Zhoushan waxay Dawladda Puntlnd ugu deeqeen riigga ceelasha biyaha qoda .
Masuuliyiinta state-ka Zhoushan ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadanayaan xaaladda biyo la’aanta ee sababtay in abaaraha ka jira Puntland ay soo noq noqdaan, waxayna sheegeen in si deg deg ah ay usoo dirayaan qalabka riigga ceelasha biyaha qoda oo dhamaystiran iyo sidoo kale koox khuburo ah oo u kuurgasha sida looga faa’iidaysan karo biyaha la helo xilliga roobabku ka da’aan deegaanada Puntland.
Wafdiga Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sidoo kale masuuliyiinta state-ka Zhoushan la galay heshiisyo ku salaysan dhinacyada Maalgashiga, Waxbarashada,
Taba-barka xirfadaha iyo iibka Kalluunka howlahaas oo si dhakhso ah loo hirgelin doono.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawlada Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa kulamo kala duwan la qaatay masuuliyiinta State-ka Zhoushan waxayna ka wada hadleen sidii loo hirgelin lahaa maalgashi dhinacyada kabayaasha dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanada Puntland.
Sidoo kale waxay isla soo qaadeen arrimaha doorashooyinka ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya, arrimaha abaaraha ka jira Puntland, waxaana wasaaradda Khayradka, Wasaaradda Dekedaha iyo Kalluumaysiga iyo Wasaaradda Biyaha ay ballan qaadeen inay wafdi kala duwan usoo dirayaan Puntland, wafdigaas oo sahminaya meelaha ugu haboon oo laga samayn karo biyo xireeno lagana qodi karo ceelasha biyaha, si bulshada Puntland ay u helaan biyo ku filan.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, iyagoo usoo gudbi doona Puntland.
DHEGEYSO-Qoysas xoolihii ka dhammaadeen oo kusoo xeroodey Burtinle.